Laura Mas. Kubvunzana nemunyori weLa maestra de Sócrates | Zvazvino Zvinyorwa
Photography: (c) Ana Portnoy. Kutendeseka naLaura Mas.
Laura More Iye muCanarian pakuzvarwa. Degree in Journalism, akashanda munhau dzakasiyana-siyana uye ariwo maneja wezvinyorwa. Nhetembo fan, ikozvino akaita chinhambwe kumabhuku ine nhoroondo yemhando yekutanga novel, Mudzidzisi waSocrates. Ndinokutendai zvikuru nguva yenyu uye mutsa nokuda kweizvi indavhiyu kuti akandipa.
LITERATURE NHASI: Yako bhuku rekutanga mumabhuku ndeiyi Mudzidzisi waSocrates. Rinotiudzei?
LAURA MAS: Chinyorwa changu chinorondedzera nhevedzano yekusangana pakati paDiotima naSocrates umo mudzidzisi anodzidzisa mudzidzi revo yechokwadi yorudo. Ndakanzwa kuda nunura mufananidzo waDhiotima, mupristakadzi nomuzivi izvo zvisingambozivikanwi chero chinhu, asi izvo zvinoonekwa mukati Mabiko yaPlato semukadzi anomukira uye anonzwisisa. Mazano ake akafuridzira pfungwa yerudo rweplatonic, ine revo yechokwadi iri kure neyazvino.
LM: Rimwe remabhuku ekutanga randaverenga raiva Muchinda mudikinaAntoine de Saint-Exupéry. Yakanga iri chinyorwa chine mifananidzo chandakapiwa nababa vangu uye chandaigara ndichiverengazve. Ndisati ndatanga kunyora novel, ndakanga ndaita nhanho dzangu duku kunyora zvimwe nyaya nenhetembo zvemagazini uye anthologies.
AL: Nderipi iro zita rakakurova uye nei?
LM: Ndichiri mudiki, zvakandicherekedza zvikuru Young Werther's SorrowsnaGoethe. Kuda uye kunzwisiswa kwemutambi wayo zvakandibaya mwoyo, sezvo panguva iyoyo ndaivawo mudiki uye ndakaora mwoyo murudo.
AL: Anofarira munyori? Iwe unogona kusarudza zvinopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
LM: Margaret YourcenarAlbert Camus, Robert Makororo, Clarice Lispector… Rondedzero yacho ingarebesa. Vanyori vatatu vemazuva ano vasina kumbondisiya ndiLorenzo Olivan, Chantal Maillard uye Luis Garcia Montero.
LM: Kune akawanda ... Dai ndaifanira kugara neimwe, ingadai iri yakaoma uye isingawirirani. Emma bovary iyo Flaubert akasika.
LM: Nokuti nyora Ndinoda kuva ndoga uye ndinowanzopfeka mumhanzi wekare yevanyori vakuru vakaita saBach, Chopin kana Debussy. Zvinondibatsira kubvisa pfungwa dzangu uye kuita kuti kunyora kwangu kuyerera zvirinani. Pane kudaro, ndinowedzera kuda silence panguva ye leer uye ini ndinoda kuzviita kunwa kapu yetii kana kofi, yakatambanudzwa pasofa kana mubhedha uye mukambani yekatsi dzangu.
LM: Nzvimbo yakanakisa, yekunyora nekuverenga, ndeye pasi pangu. Imomo ndinowana runyararo nokuzorora kuri madikanwa kunzvenga ndangariro uye kuisa pfungwa pachinhu chimwe. Panguva ya nyora, munguva pfupi yapfuura ndinosarudza kushandisa nguva yemasikati; Kusati kwave husiku chaihwo, asi ikozvino ndakagadzira muitiro wezuva nezuva wekunyora unotanga awa rokutanga mangwanani. Pane kudaro, ndakarova leer kubva panguva yechitanhatu masikati uye dzimwe nguva vanogona kundipa akawanda kana bhuku rikandibata.
LM: Kunze kwemhando yenhoroondo, ndinoda chaizvo Ensayola biography uye zvechokwadi nhetembo.
LM: Pakurudziro yemupepeti wangu, Miryam Galaz, ndiri kuverenga izvozvi Mazuva eCaucasusby Banine. Ndiri mubishi rekunyora bhuku rangu rechipiri, rinova iro nhoroondo inonakidza ine zvakawanda zvepamuzinda.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo iri kukuomera here kana iwe unogona kuchengeta chimwe chinhu chakanaka chingakushandire iwe mune ramangwana ngano nyaya?
LM: Ndinofunga munhu wese tinogona kugara nedzidziso yakanaka nekuda kwedenda, kunyangwe tiri kupfuura munguva yakaoma kwazvo pamatanho ese. Ini ndinofunga kuti, neimwe nzira uye kunyangwe ndisiri kuzviziva zvizere, sezvo ini ndichinyora chinyorwa chenhoroondo, manzwiro angu uye zviitiko zvinoratidzwa mumashoko angu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Laura Mas. Hurukuro nemunyori weMudzidzisi weSocrates